Animal Jam - Play Wild! 40.0.17 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 40.0.17 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Animal Jam - Play Wild!
Animal Jam - Play Wild! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
★ Winner: အကောင်းဆုံး App ကို 2017 က Google Play ဆုပေးပွဲ★ကလေးများများအတွက်
တိရိစ္ဆာန် Jam မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် - အစစ်အမှန်သင်သည်ဖော်ပြနှင့် Jamaa ၏လှပသော 3D ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့စတိုင်ဖန်တီး, သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာရိုင်း !, Play! တိရိစ္ဆာန် Jam လေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အသစ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat ရန်အန္တရာယ်ကင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ကို virtual အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရွေးချယ်ပြီး Jamaa ၏ကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာကြီးကိုဖြတ်ကူးအမျိုးမျိုးသောတိရိစ္ဆာန်ဂိမ်းများကိုဖြည့်စွက်! သင့်ကိုယ်ပိုင်တွင်းအလှဆင်, ပျော်စရာတိရိစ္ဆာန်ဂိမ်းများကိုဆော့ကစား, ကြောက်မက်ဘွယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များချမှတ်နှင့်ဗွီဒီယိုများ, တိရစ္ဆာန်အချက်အလက်များနှင့်တကယ်တော့-ဖြည့် e-book ကနေသဘာဝလောကအကြောင်းသင်ယူ!
ကလေးတွေတစ်ပျော်စရာတိရိစ္ဆာန်ဂိမ်း! သင့်ရဲ့တိရစ္ဆာန်အ Choose နှင့်ဝံပုလွေ, ယုန်, ကြောင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားကို virtual တိရစ္ဆာန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်လာ! , မရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Simulator ကိုဂိမ်းအတွက်မိတ်ဆွေများကို join Jamaa လောကီသားတို့သည်လေ့လာစူးစမ်းနှင့်သင့်ကို virtual အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မပေါက်ပါဘူး။
တိရိစ္ဆာန် Jam - တောရိုင်း Play! ယခုနှစ်ရဲ့ Google ဆုပေးပွဲ Play မှာ Google က "ကလေးတွေကအဘို့အကောင်းဆုံး App ကို" "အမည်ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းကလေးတွေသန်းပေါင်းများစွာတိရိစ္ဆာန် Jam ကစားနေကြတယ်, ကျနော်တို့ကလေးတွေအတွက်လုံခြုံအွန်လိုင်းကစားကွင်းပေးရန်ကျူးလွန်နေကြတယ်။ "
- အမြီးမှဦးခေါင်းမှသင်၏တိရိစ္ဆာန်များ personalize
- ပျော်စရာဂိမ်း PLAY နှင့်ကျောက်မျက်ရတနာဝင်ငွေ
- တစ်ဦးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့, အသကျရှငျ 3D ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်
- အဝတ်, တွင်းအလှဆင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် Shop
- သင့်ကိုယ်ပိုင်တွင်း Design
- ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားသမားတစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးအသိုင်းအဝိုင်း JOIN
- တိရိစ္ဆာန် buddy နဲ့ chatting စကားပြောဖို့
သငျသညျ Jamaa ရှာဖွေစူးစမ်းစတင်ခင်မှာ, ဒီမှာကလေးတွေနှင့်မိဘများအတွက်အချို့သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များသည်:
- အဆိုပါတိရိစ္ဆာန် Jam - တောရိုင်း Play! ဂိမ်းမိဘခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
- မိဘများကသူတို့ရဲ့မိဘ Dashboard ကိုတဆင့်လူမှုရေး features တွေရန်ကစားသမားများ '' access ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန် Jam - တောရိုင်း Play! အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံကုန်ကျကြောင်း optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူမှုပေးထားပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ device ကို setting များကိုချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့် In-app ကိုဝယ်ယူမှုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို disable နိုင်ပါတယ်။
ဒီ app ကိုလည်းအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံကုန်ကျကြောင်းအဖွဲ့ဝင်ကြေးပေးသွင်း options များထပ်တလဲလဲတိရိစ္ဆာန် Jam ပေးထားပါတယ်။ အများစုမှာ In-app ကို features တွေအခပေးအဖွဲ့ဝင်မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော် app ထဲမှာသီးသန့်အဖွဲ့ဝင် features တွေအပြင်, ကြေးပေးသွင်းကိုလည်း AnimalJam.com ကို web ဂိမ်းထဲမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်သည်ပေးဆောင်။
အကြောင်း Animation က JAM - Wild PLAY!
WildWorks သိပ္ပံပညာရေးနှင့်လုံးဝနည်းလမ်းအသစ်ကလေးတွေဖို့သဘာဝလောက၏အံ့မခန်းပုံရိပ်များကိုရောက်စေဖို့ထင်ရှားတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ပညာတတ်များနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်လေးတွေအွန်လိုင်းကစားရန်အဘို့အပျော်ရွှင်စရာ, စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရာအရပျပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန် Jam လည်းမိမိတို့၏တံခါးများအပြင်ဘက်သဘာဝလောကစူးစမ်းခြင်းနှင့်ကာကွယ်ပေးရန်လေးတွေစိတ်အား။
WildWorks မှာသင့်ကလေး၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန် Jam - တောရိုင်း Play! app ကို filtered နှင့် monitor စကားပြောခန်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြည့်ညှင်းနှင့်ချက်ချင်းကစားသမားပိတ်ဆို့နှင့်အစီရင်ခံရန်စွမ်းရည်အတွက်လုံခြုံမှတ်တမ်းနှင့်အတူသင့်ကလေး၏ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးသည်။
ကျနော်တို့သားသမီးရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပုံကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, http://www.animaljam.com/privacy သွားရောက်ကြည့်ရှု။
ကလေးများအမြဲသူတို့ဒေါင်းလုတ်လုပ်မတိုင်မီခွင့်ပြုချက်အဘို့မိမိတို့မိဘသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူကိုမေးနှင့်ကစားသင့်ပါတယ်။ ဒီ app တစ်ခုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်တယ်, Wi-Fi ချိတ်ဆက်မပါလျှင် data ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
တိရိစ္ဆာန် Jam - တောရိုင်း Play!
Animal Jam - Play Wild! အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Animal Jam - Play Wild! အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Animal Jam - Play Wild! အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Animal Jam - Play Wild! အား အခ်က္ျပပါ
freehostsoftware စတိုး 11.06k 1.74M
Animal Jam - Play Wild! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Animal Jam - Play Wild! အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 40.0.17
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.animaljam.com/privacy/playwild
File Size: 586.64MB
Release date: 2019-08-04 18:01:55
လက်မှတ် SHA1: A3:30:28:51:EB:07:39:AB:35:C0:03:60:D3:E6:AC:1B:C1:47:06:37
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Clark Stacey
အဖွဲ့အစည်း (O): "Smart Bomb Interactive
နယ်မြေ (L): Salt Lake City
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Utah
Animal Jam - Play Wild! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ